Mofon’aina – TALATA 13 FEBROARY 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – TALATA 13 FEBROARY 2018
8 Ary izay tanàna iakaranareo, ka mandray anareo ny olona, dia hano izay zavatra aroso eo anoloanareo.9 Ary sitrano izay marary ao, ka lazao amin’ ny olona hoe: Efa mby akaiky anareo ny fanjakan’ Andriamanitra.10 Fa izay tanàna iakaranareo, ka tsy mandray anareo kosa ny olona, dia mankanesa eo amin’ ny lalambe, ka lazao hoe:11 Ny vovoky ny tanànanareo aza, izay miraikitra amin’ ny tongotray, dia fafànay hiampanga anareo; nefa aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky anareo ny fanjakan’ Andriamanitra.12 Lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin’ i Sodoma amin’ izany andro izany noho ny ho amin’ izany tanàna izany.
LIOKA 10 :8-12
RAISO NY FILAZANTSARA
1-Mandray ny Filazantsara izay mandray ny mpitory
« Izay tanàna iakaranareo ka mandray anareo ny olona … »(and 8). Manatona amin’ny isan-tanàna ny Tenin’ Andriamanitra sy ny Filazantsara . Tazana eto fa ny olona na ny tanàna vonona handray ny Filazantsara sy ny Tenin’ Andriamanitra dia mandray tsara izay iraka mpitondra ny Tenin’ Andriamanitra aloha. Tsy zava-baovao ity fahatongavan’ny teny na ny Filazantsara any amin’ny toeram-ponenan’ny olona ity. Tandindon’ny nahatongavan’i Jesoa ho olona tety an-tany io, mba hiara- monina amintsika . Ny teny dia tonga nofo ka niara-nonina tamintsika. Ka izay mandray ny mpitory dia mandray an’i Jesoa , ary izay mandray an’i Jesoa dia mandray an’ Andriamanitra izay naniraka an’i Jeso (vakio Mat 10 :40)
2-Manakaiky ny fanjakan’ Andriamanitra ny mandray Azy
Rehefa tonga ny mpitory ka raisin’ny olona dia misy fanasitranana , izay mariky ny fanjakan’ Andriamanitra . Efa eo ambaravaran’ny fanjakan’ Andriamanitra izay mandray ny teny sy ny Filazantsara. Rehefa eo am-baravarana isika, dia miandry ny feo mampandroso sisa dia tafiditra « midira amin’ny fifalian’ny Tomponao ». Ny fiampangana sy ny fanamelohana ambara eto ho an’izay tsy mandray dia tsy fampitahorana , fa fitaomana antsika tsy hizotra mankamin’izany . Koa raiso ny Filazantsara ary raiso ny mpitory Filazantsara dia handray an’i Jesoa ianao.
Misy olona minia mifidy zavatra ratsy ve?